Kulan Daba socday Roadmabkii oo maanta ka dhacay Magaalada Gaalkacyo – SBC
Kulan Daba socday Roadmabkii oo maanta ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
Posted by Webmaster on March 26, 2012 Comments
Magaalada Gaalkacyo Xarunta gobolkaasi Mudug waxaa goor dhoweyd ku soo gaba gaboobay kulan ku aadanaa Road mapkii lagu sixiixay magaalada Garowe xarunta Puntland waxaana kulankaasi yeeshay madaxda dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo masuuliyiinta Maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug.
Waxaa isagana qeyb ka ahaa kulankaasi ergeyga Soomaaliya u qaabilsan Qaramada Midoobay Mr Mahiiga iyo xubno kale oo ka tirsan beesha caalamka .
Kulankaasi ayaa waxaa ugu waaweynaa arimaha diirada lagu saarayay dastuurka umada Soomaaliyeed iyo qaabkii loo so xuli lahaa xubnaha bulshada ee iyagu codka u qaadi lahaa una dhameystiri lahaa qabyo qoraalka Dastuurka .
Kulankaasi waxaa hadalo ka jeediyay Madaxdii ku sugneyd iyagoona ka sheekeeyay muhiimada kulanku leeyahay waxaana ugu dambeyntii uu ku soo gaba gaboobay si wanaagsan inkastoo aan jirin wax war ah oo ay saxaafada siiyeen masuuliyiintii ka qeyb galay kulanka.
ASCaleykum waxaan kula talin lahaa umadda soamliyeed dastuurka illaah SWT hala meel mariyo hana lagu dhaqmo taas ayaad ku heleysaan khaatumo wanaagsan oo aduun iyo aakhiro ku anfacda laakiin hadaad raali gelisid gaal raba inuu kugu xukumo wuxuu soo samaystey illaah SWT baa kuu caroonaya marka illaah SWT halaga baqo qof kasta illaah SWT ayuu hor istaagayaa sc.
waxan ku latalinayaa dadka loo xulayo inay ucodayaan dasturka cusub ee soomaaliya yeelanayso dhowaan in ay sifiican uga fiirsadaan wixii dan inoo ah ee kuqoran ee umada soomaaliyeed anfacayaa diintana kusalaysan ey meel mariyaan wixii kalena ay diidaan sababto ah waxa saaran masuliyad weyn umada soomaaliyeed oo dhan ayay waxay uyihiin wakiil wixii khaldan waa inaad diidaan si loobedelo wana mahadsantihiin